August 3, 2019 - Online Bunner
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ကျား၊မ မရွေးသိထားသင့်သော လိင်စိတ်နိုးထခြင်းအကြောင်းများ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ကျား၊မ မရွေးသိထားသင့်သော လိင်စိတ်နိုးထခြင်းအကြောင်း လိင်စိတ်နိုးထခြင်း sexual arousal”သည် လိင်ဆက်ဆံရန်အသင့်ရှိသော အခြေအနေကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် လူသားတို့ လိင်စိတ် နိုးထသောအခါ ယောက်ျား လိင်တံတွင်သွေးများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာပြီး လိင်တံတင်းမာလာပါတယ်။ ထိုအရာသည် ယောက်ျားတို့တွင် အမြင်သာဆုံးနှင့် အယုံကြည်ရဆုံးလက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများကိုလေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် ယောနိတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော လိင်ဆက်ဆံခြင်း […]
မန္တလေး၌ လမ်းလျှောက်လာသူ အမျိုးသားတစ်ဦး ထံမှ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးဖမ်းဆီးရမိ…..
မန္တလေး၌ လမ်းလျှောက်လာသူ အမျိုးသားတစ်ဦး ထံမှ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးဖမ်းဆီးရမိ မန္တလေး၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ၆၂လမ်းမ တွင် လမ်းလျှောက်လာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးထံမှ လက်ပစ်ဗုံး (၁)လုံး နှင့်အတူ စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးပြား ၃၃၀ပြားအား ဩဂုတ် ၂ ရက်နေ့ ညပိုင်း ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရသည် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီနှိမ်နှင်းရေးတပ်ဖွဲ့(၁၈)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ည၁၁နာရီခွဲအချိန်ခန့် […]
ဆရာ၊ဆရာမများ ကလေးများကို ရိုက်လျင် ထောင်ခြောက်လနှင့် ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း ချမှတ်မည်ဟု
ဆရာသမားများကို အနန္တ ဂိုဏ်းဝင်များအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန် မာလူမျိုးများက မှတ်ယူထားကြ သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာသမား များ၏ဆိုဆုံးမစကားများကို လေးစားလိုက်နာ၊ နာယူမှတ်သားကြ သည် ဆရာများအနေဖြင့်လည်း ‘ဆရာ့ကျင့်ဝတ်’ ငါးပါးဖြစ်သည့် ‘အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊ သိပ္ပမချန်၊ ဘေးရန်ဆီးကာ၊ သင့်ရာအပ်ပို့၊ ဆရာတို့ ကျင့်ဖို့ဝတ်ငါးဖြာ’ ဟူသော […]
ရေစိုနေသောလက်ဖြင့် ဖုန်းအားသွင်းရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု….
ရေစိုနေသောလက်ဖြင့် ဖုန်းအားသွင်းရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံး မိုးနဲမြို့ နားခံကျေးရွာ၌ ရေစိုနေသောလက်ဖြင့် ဖုန်းအားသွင်းရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လင်းခေးခရိုင် မိုးနဲမြို့နယ် နားခံကျေးရွာအုပ်စု နားခံကျေးရွာတွင် ရေစိုနေသောလက် ဖြင့် ဖုန်းမီးအားသွင်းရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မိုးနဲမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်…. ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့ည ၈ နာရီအချိန်ခန့်က ဒုတိယရဲအုပ်ကျော်သီဟ […]
သူငယ်ချင်းကို ကျောက်ကပ် လှူပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း မခေါ်မပြောတာကို ခံနေရတဲ့ မိန်းကလေး ရဲ့ အဖြစ်
သူငယ်ချင်းကို ကျောက်ကပ် လှူပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း မခေါ်မပြောတာကို ခံနေရတဲ့ မိန်းကလေး ရဲ့ အဖြစ် ၂၀၁၇ နွေရာသီ တုန်းက ဆလီနာရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ရေဆာက ဆလီနာကို ကျောက်ကပ် လှူပေးခဲ့ပါတယ် ဆိုတာ အားလုံး သိပြီးသားပဲ ဖြစ်မှာပါ ကျောက်ကပ် […]
ချစ်သူတွေကြားမှာ စိတ်ထဲမှာ မသိစိတ်ကနေ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဖြစ်နေသောပြသာနာတွေက အိပ်မက်မှာ ပေါ်လာလိမ့်ပါမယ်။ဘယ်လို အိပ်မက်တွေဖြစ်မှာလဲ။ အိပ်မက်တွေကို သတိထားကြည့်လိုက်ပါနော်။ ၁. ချစ်သူနဲ့ပျော်ရွှင်သာယာနေသော အိပ်မက်… ချစ်သူနဲ့ကွဲရန် နီးစပ်နေလို့မြင်ရသော အိပ်မက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အိပ်မက်ဆိုတာ ပြောင်းပြန် စဉ်းစားကြည့်ရပါတယ်။ ကိုယ်က ချစ်သူအပေါ်မှာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမြဲတမ်း အနိုင်ယူနေတာတွေက ပြသာနာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ […]
ဘယ်သူမှမသိဘူးအထင်နဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ကဲနေကြတဲ့စုံတွဲ လူမှုကွန်ရက်မှာနာမည်ကြီးနေ…..
ရုပ်ရှင်ရုံဆိုတာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့နေရာလို့ အလွယ်အားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလို့ ရပါတယ် ဒါပေမယ့် မျက်မှောက်ခေတ် စုံတွဲတွေကြားမှာတော့ ဒီအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာ အပြည့်အဝ မှန်ချင်မှ မှန်ပါလိမ့်မယ် သူတို့တစ်တွေအတွက်တော့ ရုပ်ရှင်ရုံ မီးမှိတ်ပြီး ဇာတ်ကားပြတဲ့အချိန်ဟာ- သူတို့အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ရယူရမယ့်အချိန် ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ အခု လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်မှာလည်း သမီးရည်းစားစုံတွဲတစ်တွဲဟာ […]
WLC ခရူဆာဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ခါးပတ်ယူလိုက်တဲ့ ဒေဝ ( ရုပ်သံ )……
WLC ခရူဆာဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ခါးပတ်ယူလိုက်တဲ့ ဒေဝ ( ရုပ်သံ ) မြန်မာ့ ရိုးရာလက်ဝှေ့ အလွတ်တန်း ချန်ပီယံဟောင်း ဒေဝ ခေါ် ဒေ့ဗ်လက် (ကနေဒါ) ဟာ UFC ဖိုက်တာ ဆက်သ်ဘက်ဇင်စကီး (အမေရိကန်) ကို အနိုင်ယူပြီး WLC – World […]
အိပ်ပျော်နေသောအမျိုးသမီးခြင်ထောင်အားလှန်ပြီး ခန္ဒာကိုယ်အားကိုင်ကြည့်သူ အရေးယူခံရ….
အိပ်ပျော်နေသောအမျိုးသမီးခြင်ထောင်အားလှန်ပြီး ခန္ဒာကိုယ်အားကိုင်ကြည့်သူ အရေးယူခံရ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဖဒိုမြို့ ဖဒိုရဲစခန်းအပိုင်တွင် သြဂုတ်လ(1)ရက် ည (၁၁)နာရီအချိန်ခန့်ကကင်းရွာကျေးရွာအုပ်စု ထီးလဒ်ကျေးရွာနေသူ ဦးသန်းလွင်သည် မိမိ၏နေအိမ်ဘုရားစင်ရှေ့တွင် အိပ်ပျော်နေပြီးဇနီးဒေါ်ခင်အေး(၅၂)နှစ်သ္မီးမဝါဝါအေး (၁၂)နှစ် တို့နှစ်ဦးမှာနေအိမ်၏နောက်ခန်းတွင် အိပ်ပျော်နေပါသည် ထိုသို့အိပ်ပျော်နေစဉ် ဇနီးဖြစ်သူ အိပ်ပျော်နေသောအိပ့်ခန်းဘက်မှ ကြွက်ပု ကြွက်ပု ခြင်တောင်လှန်ပြီး လိုက်စမ်းနေတယ်ဟုဓါတ်မီးထိုးပြီး အော်နေသံကိုကြားသဖြစ်ဦးသန်းလွင် အိပ်ရာမှ လန့်နိူးလာပြီး […]